Daawo Sawirrada: Dhakhtar Sida Darbi Jiifta U Labbista Oo Si Lacag La’aan Ah Dadka Ku Daaweeya! | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Daawo Sawirrada: Dhakhtar Sida Darbi Jiifta U Labbista Oo Si Lacag La’aan...
Daawo Sawirrada: Dhakhtar Sida Darbi Jiifta U Labbista Oo Si Lacag La’aan Ah Dadka Ku Daaweeya!
In ka badan 20 sano, Dr. Jim Withers wuxuu ku socdaalayaa jidadka Pittsburgh ee Pennsylvania – isaga oo kusii jeeda meelaha dib-jirtu gabaadsato, siiyana baxnaano, daweyn iyo daryeel caafimaad. Wuxuu samafalkiisa ugu yeeraa ‘dawada jidka’.
Markuu ugu horreyn bilaabay, wuxuu isku ekeysiiyay sida dib-jirta uu rabo inuu gargaaro. Xirashada dhar-duug ah iyo dhaashi-xumida, wuxuu ku raja-weynaa inuu ku guuleysto kalsoonida dadka hoyga la’ ee jiifta jidadka iyo kaabadaha hoostooda.
Maanta,way yaqaaniin kuna kalsoon yihiin – iyaga oo aaminsan inuu baxnaanadooda u hurayo naftiisa.
“Waan la niyad-jabay sida diifaysan oo dadkani u nool yihiin. Waa sida adiga oo dunida saddexaad jooga,” ayuu yiri. “Da’yar, duqow, kuwa maskaxda ka xanuunsan, carruurta lasoo xooray iyo haween dhibanayaal u noqday xaalado qoys. Dhamaan waxay leeyihiin sheekadooda gaarka ah.”
Wuxuu joogto u hubiyaa inta dhaawacan iyo kuwa xanuunsan. Wuxuuna siiyaa dawada ay u baahan yihiin. Waxaa intaas ka fog inuu ku saacido helidda ceymis, hoy iyo daryeelka caafimaad ee aas’aasiga u ah.
Withers wuxuu sidoo kale abuuray shabakad lagu magacaabo Operation Safety Net – oo ah urur bixiya adeeg caafimaad oo guurguura. Si taas ugu fududaato, wuxuu la dhinac shaqeeyaa Pittsburg’s Mercy Health System oo ku howlan caafimaadka iyo ururro kale.
Ururka ama shabakaddiisa waxay sidoo kale tababarro siisaa dhaqaatiirta si ay usii joogteeyaan falkiisa samafalka ku dhisan.
Wuxuu sanadkii 2016 ku guuleystay biladda CNN Hero of the Year. Waxaa lagu bogaadiyay sida quruxda iyo qiimaha leh oo uu ugu dhiirriday daryeelka qeybta bulshada kamid ah ee laga hilmaamay xuquuqdii ay mudnaayeen.